Fikarohana momba ny firaisana Ny Tantaram-piainana taloha momba an'i John Elliotson | Norm Shealy, MD: Fifandraisana ara-panahy na fitarihana ara-panahy amin'ny raharaha momba ny fanambadiana gikan-tany - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ahoana no nahatonga izany? Fanahy na torohevitra intuitive
Mpikaroka: Norm Shealy, MD, PhD
Article by: Walter Semkiw, MD, from ateraka indray ary Fiverenan'ny revolisionera
Fanomezana ara-pitsaboana an'i Norm Shealy: TENS Unit & Dorsal Column Stimulator
Ny Norm Shealy dia neurosurgeon malaza erantany, mpanoratra ary manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana fanaintainana. Ny Norm dia mpamorona ny TENS Unit, fitaovana iray izay mamoaka herinaratra amin'ny alalan'ny hoditra izay manala ny fanaintainana. Izy koa no namorona ny "Stimulator Column Dorsal", fitaovana napetraka eo ambany hoditra izay misy plastika izay napetraka eo akaikin'ny tadin'ny hazon-damosina, izay mamoaka herinaratra herinaratra mba hanakanana ny fikorianan'ny fanaintainana amin'ny tranga izay miteraka fanaintainana mafy sy mahatsiravina. Dr. Shealy koa dia mpamorona ny Facet Rhizotomy, fomba fikarakarana izay manaparitaka ny fibre uterus mba hampihenana ny fanaintainana avy amin'ny firaiketan'ny lamosina.
Ny Dr. Shealy koa dia heverina ho rain'ny fandaharana feno fanaintainana maoderina, izay mitaky fomba maro samihafa, mampiasa psychologists sy dokotera. Ho an'ireo antony rehetra ireo, i Norm Shealy dia fantatra any amin'ny vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana manerana izao tontolo izao.
Fitarihana fanahy na fifandraisana ara-panahy: ny fahatsapana Iceberg dia nidina tany an-damosin'i Norm rehefa nahare ny anarana John Elliotson izy
Norm Shealy dia nianatra momba ny fiainany teo aloha izay nahitany an'i John Elliotson, dokotera 19 XIX tany Grande-Bretagne izay mpitsabo mpanentana ara-pitsaboana sy manam-pahaizana momba ny fanaintainana. Ao amin'ny teniny manokana, dia nanazava ny fomba nahalalany momba ity zaza vao lasa ity i Dr. Shealy. Ao amin'ilay lahatsoratra etsy ambany, ny Snowmass dia manondro toeram-pisakafoanana any Colorado.
“Tamin'ny volana janoary 1972 dia nipetraka tamina lahateny iray tao amin'ny Neuroelectric Society tany Snowmass tany Aspen aho niandry ny famitan'i Dr. William Kroger ny lahateny nataony. Somary sosotra aho satria nanandrana nandresy lahatra anay izy fa hypopotisma ny akupunktur ary nilaza tampoka izy hoe: "Tamin'ny taonjato lasa dia naneho dokotera britanika iray fa afaka miasa amin'ny marary izay saro-pantarina ianao. Ny anarany dia John Elliotson. " Rehefa nilaza an'izany izy dia nahatsapa ho toy ny nanipazana vongan-dranomandry teo an-damosiko ary hoy aho anakampo: 'Andriamanitro, izaho izany.' ”
Fitarihana fanahy sy fitadidiana jeografika amin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Norm Norm dia mitondra mpamily fiarakaretsaka mankany amin'ny biraon'ny mpitsabo an'i Elliotson
"Tsy momba ny atsy na ny aroa momba ny fanambadiana teraka tao amin'ny vatana vaovao aho tamin'izany fotoana izany. Nanontaniako ny mpiambina trano ahy raha afaka mahazo fampahalalana momba ahy momba an'i John Elliotson izy nefa tsy afaka. Ka tamin'ny volana Jona tamin'io taona io dia nankany London aho. Niditra tao anaty fiarakaretsaka aho ary nangataka tamin'ny mpamily fiarakaretsaka hitondra ahy any amin'ny Royal College of Surgeons, tamin'ny fiheverana fa tsy maintsy mpandidy i John Elliotson.
Rehefa nivily ny zoro iray miankavanana izahay dia nipetraka tao ambadiky ny taksi aho ary nalaina ara-batana tampoka ary nivadika tamin'ny lalana mifanohitra aminy, ary nahatsapa ho toy ny nisy ranomandry taty aoriana. Ny sakana iray miankavia, fa tsy ny ankavanana, dia ny University College Hospital any London (sary etsy ambany), izay ny biraoko dia John Elliotson. Nandeha an-trano aho ary nahatsapa fa tao an-trano. ”
Ny anjara birikin'i John Elliotson ho an'izao tontolo izao
“Hay i John Elliotson no Profesora voalohany momba ny fitsaboana tao amin'ny hopitaly University College. Nanao ny lazany tamin'ny 1830 izy nanao lahateny ampahibemaso momba ny lafiny fitsaboana isan-karazany. James Wakeley, tonian'ny Lancet tamin'izany fotoana izany dia matetika namoaka ny lahateniny. Nandritra ny asany amin'ny maha-internista azy dia nampahafantatra ny stethoscope ary ny fampiasana sigara, avy any Frantsa izay nianatra azy. Nampiditra azy koa izy mesmerism ary nanomboka nametraka ny fampisehoana ampahibemaso tao amin'ny amphitheater.
Mpinamana izy Charles Dickens ary William Thackeray. Nampianatra an'i Dickens ny fomba hampiasana ny hafanam-po amin'ny vadiny vadiny izy. Elliotson no dokotera voalohany tany Londres mba handao ny kibony. Nofaranan-dry zareo volo mainty hoditra izy ary nandeha niaraka tamin'ny fofom-bohiny.
Nasehony ihany koa fa ny marary sasany izay napetraka tao anaty tsangam-batana dia nanjary nazava sy mora jerena. Elliotson koa dia nanentana an'i James Esdaile hanao asa be dia be amin'ny marary marary. Esdaile tatỳ aoriana dia nanoratra boky iray antsoina hoe Fitarihana ara-boajanahary sy ara-tsaina ary nanonona ny fampiasana an'i Elliotson ho mpanao hetsi-panoherana ipnotic noho ny fampiroboroboana ny fanairana. Farany dia nanontanian'ny Filankevi-pitantanana i Elliotson mba tsy hijanona amin'ny fampisehoana ampahibemaso. Elliotson dia tezitra ary nialany.
Nanohy namoaka lahatsoratra nandritra ny roa ambin'ny folo taona izy The Zoist, izay nitantarany lafiny maro amin'ny mesmerism, anisan'izany ireo marary maherin'ny 300 izay nodidian'ny mpandidy iray hafa rehefa napetrak'i Elliotson ilay marary. Farany dia nasain'ny Royal College of Physicians hanome ny Lecture Haverian isan-taona izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fitsaboana. Nomeny ny lahateniny momba ny fihatsarambelatsihin'ny siansa amin'ny fanekena eritreritra vaovao. ”
Ny Norm dia manosika ny kirarony ary manimba ny volony
“Ankehitriny amin'ny fitoviana amin'ny fiainako. Tamin'ny 9 taona dia nanao knickers ny rehetra fa izaho kosa. Niezaka ny hanao ahy knickers ny reniko ary ho tezitra aho ka hosarahiko. Fony mbola zazakely aho, angamba 4 na 5, dia maniry volo mainty be volo mainty aho ka tonga tany amin'ny nenitoako ary nanapaka ny hidin'ny volony mainty. Fony aho enina ambin'ny folo taona ary handeha hianatra any amin'ny oniversite fotsiny, nolokoiko mainty ny voloko fa tsy nanao mihoatra ny indray mandeha mihitsy aho. Sahirana be loatra izany. John dia manam-pahaizana latina koa ary nandrombaka ny medaly latinina roa taona tany amin'ny lisea aho. Fony aho 9 taona, dia tapaka lalan-dra kely teo amin'ny lembalemban'ny tibial havanana. Nanjary voan'ny abscess io. Talohan'ny antibiotika izany ary nolazaina tamiko fa handeha malemy foana aho.
Na dia tamin'ny faha-efatra taonako aza dia nilaza aho fa ho dokotera, tamin'ny faha-enina ambin'ny folo taona dia nieritreritra foana aho fa ho lasa mpitsabo aretin-tsaina. Teo anelanelan'ny taona zandriko sy antitra nianarako tao amin'ny sekolim-pitsaboana dia nanao dia nandritra ny telo volana aho mba hitsidihana ireo mety ho fizahana fiofanana isan-karazany. Niverina tany Duke aho ary nanapa-kevitra ny hianatra amin'ny fitsaboana anatiny fa tsy fandidiana, na dia mbola nanohy ny fitsaboana amin'ny neurosurgery aza aho taorian'ilay fiofanana. ”
Norm Shealy dia tia an'i Dickens sy Thackeray, ireo naman'i John Elliotson taloha
“Charles Dickens dia iray tamin'ireo mpanoratra tiako indrindra tamin'ny fahazazako. Tamin'ny 1974, dia nitsidika an'i Olga Worrall, ilay mpanasitrana lehibe aho. Tao anaty fahitana hypnotic dia hitako nandehandeha namakivaky ny efitranony izy, naka boky teo ambony latabatra ary namerina azy. Niantso an'i Olga aho avy eo ary nanontany azy hoe inona ilay boky nandry teo ambony latabatra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahininy. Nilaza izy fa izany Pendennis nataon'i William Thackeray. Thackeray nanokana ny tantarany, Pendennis (1850), ho an'i Dr. Elliotson ary namolavola ny toetrany, Dr. Goodenough, tao anatin'io tantara io, taorian'ny Elliotson. ”
Famerenana ny talenta sy fisainana amin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao:
Norm dia manoratra ilay boky mitovitovy amin'ny Elliotson momba ny fihatsarambelatsihy ara-pitsaboana
“Nandany ny ankamaroan'ity fiainana ity aho mba hampiala olona amin'ny zava-mahadomelina fa tsy hametraka izany aminy. Enim-bolana talohan'ny nandrenesako ny anaran'i Elliotson dia namoaka tantara tsy fantatra anarana miompana amin'ny fihatsarambelatsihin'ny fanafody amin'ny fanekena hevitra vaovao aho. Nampiasako ny ohatra maro nataon'i Elliotson tamin'ny lahateniny Harveriana.
Tao amin'ny 1973, iray volana talohan'ny nahenoako ny anaran'i John Elliotson, nahazo ny $ 50,000 fanomezana avy amin'ny orinasa Fortune 500 aho, izay nangataka ny hijanona tsy mitonona anarana, hianatra ny fitsaboana ara-tsaina.
Nandritra ny 1973 dia nitsidika olona dimy amby fitopolo aho, izay nolazaina fa mpilalao mahay, ary nanao fitsapana momba ny fitsaboana ara-pitsaboana aho, na ny fahaiza-manao ara-pahasalamana tsy dia mahazatra loatra na ny fahatsapan-tena ho marary. Nahita dimy izahay izay teo anelanelan'ny 70 sy 75% marina. Rehefa nolazaiko tamin'ireo fiaraha-midinika dimy amby fitopolo dia nitsidika aho fa nanana ny fahatsapako manokana aho fa i John Elliotson, ny dimy amby fitopolo nanaiky. Nandritra ny fito taona teo amin'ny fiainako dia namoaka gazety aho, Holos Practice Reportes, amin'ny fomba hafa amin'ny fitsaboana.
Raha fintinina, tsy mbola nanontany mihitsy aho hoe i John Elliotson tamin'ny fiainako farany. Teraka tamin'ny Oktobra 24, 1791 i John Elliotson. Tamin'ny taona 19 dia nahazo mari-pahaizana momba ny fitsaboana izy. Mahaliana fa niditra tao amin'ny sekoly momba ny fahasalamana aho tamin'ny taona 19. Maty tamin'ny Jolay 29, 1868 izy. Avy eo, i John dia nanorina ny Phrenology Fikambanana any Londres ary mahaliana ny nandehanako tany amin'ny neurosurgery, izay azo antoka fa misy ifandraisany amin'ny karan-doha. ”
Fahaizana momba ny firaisana amin'ny sehatry ny fanambadiana: Fikambanana ara-panahy na fitarihana fanahy
Andeha isika handinika fohifohy ny singa manan-danja amin'ny Elliotson | Raharaha Casey. Rehefa naheno an'i John Elliotson voalohany ny Dr. Shealy, dia fantany tamin'ny fomba mibaribary fa izy no Elliotson nandritra ny fiainany taloha. Nitranga izany na dia tsy natokana ho an'ny vatana vaovao aza i Dr. Shealy, tamin'io fotoana io. Ny Dr. Shealy dia nanana izany fahalalana anatiny izany, izay niaraka tamin'ny fahatsapana mahatsikaiky ny "iceberg" nidina ny lamosiny, talohan'ny nianatra ny fiainan'i Elliotson ary tsy nahita ny sarin'i Elliotson. Rehefa nandeha tany Londres i Dr. Shealy mba hikaroka an'i Elliotson, dia notarihina tamim-pitandremana tao amin'ny biraon'ny Elliotson tao amin'ny Hopitaly College College any Londres izy (fanorenana ankavanana). Ity hetsika ity koa dia niaraka tamin'ny fahatsapana "iceberg".
Ireo fisehoan-javatra ireo dia manondro ny fitarihana fanahy, izany hoe ny fanahin'i Norm Shealy manokana dia niasa nanampy azy hahita ny fiainany taloha toa an'i John Elliotson.
Fantatr'i Dr. Shealy avy eo fa izy sy i Elliotson dia samy nanana ny heviny. Samy mizara ny toetra maha-mpitsabo ny mpitsabo izy ireo, ka nampidirin'i Elliotson ny fampiasana ny stethoscope any Angletera ary ny Norm Shealy dia namorona ny singa TENS sy ny "Dorsal Column Stimulator".
Samy naneho fahalianana tamin'ny fitantanana ny fanaintainana izy ireo. Elliotson dia nampiditra ny fampiasana trondro tany Angletera, raha i Dr. Shealy kosa lasa manam-pahaizana manerantany momba ny fitantanana fanaintainana. Ao amin'ny asa aman-kasiny amin'izao fotoana izao, Dr. Shealy dia niezaka nitady fomba hitantanana fanaintainana mba hahafahan'ny olona miala sasatra. Elliotson dia mpikaroka internista, izay nanangana frenolojia taty aoriana, izay mitaky ny fianarana ny karandoha. Ny Dr. Shealy dia nisafidy ny hiditra ao amin'ny fitsaboana anatiny, avy eo niova saha ary nanjary neurosurgeon.
Elliotson dia liana tamin'ny fisainana na hypnosis, tombontsoa navoakan'ny Dr. Shealy. I Elliotson dia liana tamin'ny fanamarihana fa mety hampiroborobo ny hipnotisma ny hypnosis. Dr. Shealy dia miara-miasa amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo sy ny fitaovana fitsaboana, anisan'izany Caroline Myss. Samy naneso azy ireo ny singa mpandala ny nentim-paharazana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana noho ny fomba fiasa vaovao.
Elliotson dia nanome sombin-tsasatra ny mpitsikera azy fony izy tao amin'ny lesona Harveriana, dia nanolotra kabary momba ny fihatsarambelatsin'ny siansa izy tamin'ny fanekena hevitra vaovao. Dr. Shealy dia namoaka tantara miaraka amin'ny hafatra mitovy aminy ary nampiasa ohatra mitovy nampiasain'i Elliotson tao amin'ny "Leverian Lecture". Elliotson dia nanofy volo mainty izay notadiavin'i Dr. Shealy tamin'ny fahatanorany. Elliotson dia nandao ny kibony, izay pataloha nidina teo ambany lohalika. Dokotera i Dr. Shealy raha nanandrana naka azy toy izany koa ny reniny.
Zava-dehibe ny nahitako voalohany ny Dr. Shealy tao amin'ny 2002, tsy nahafantatra izy fa ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety hifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafatiny. Rehefa nanontaniako izy raha toa izy toa an'i John Elliotson, namaly i Norm hoe: "Tsy fantatro!" I Norm dia nanaiky handefa sary momba an'i Elliotson sy ny tenany ho mpianatra momba ny fitsaboana, izay heveriny fa mety hitovitovy aminy. Ny sary, izay aseho amin'ny ankavanana, dia mampiseho ny rafitra endrika mifanandrify. Tahaka ny amin'ny raharaha Robert Snow, ny nahatonga an'i Norm Shealy namoaka ny fiainany taloha tamin'ny fomba mandaitra, izay inoana fa ny fanamboarana indray ny Elliotson ary tsy mifantoka amin'ny fisehoana iraisana akory, dia manamafy fa ny tsy fitoviana amin'ny endriky ny endriky ny olona iray hafa dia tena marina tokoa zava-misy marina.
Mariho fa ny Norm Shealy dia azo raisina ho toy ny zaza madinika ara-pahasalamana. Nandritra ny efa-taona dia nanambara izy fa dokotera izy, tamin'ny taona 16 dia fantany fa ho mpandoro ny neurosurgon izy, izay mitovy taona aminy no niditra tao amin'ny oniversite. Ny Norm dia niditra ny sekoly fianarana ara-pahasalamana tamin'ny vanim-potoana vanim-potoanan'ny 19. Nampianatra tany Harvard izy ary lasa mpitsabo malaza sy manam-pahaizana momba ny fahasalamana eran-tany, nanavao ny fampiroboroboana ny asa nataon'i John Elliotson. Ity tranga ity dia mampiseho ny fomba Ny zaza amam-behivavy dia azo hazavaina amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny vatana vaovao.
Tranga roa fanampiny izay nalaina tamin'ny Elliotson | Ny lalan'i Shealy dia ahitana ny trangan'ny Charles Dickens | JK Rowling sy Anton Mesmer | John Kabat-Zinn.
Fitoviana ara-batana: Norm sy John Elliotson dia manana endrika mitovy amin'ny tarehy, zavatra izay tsy nankasitrahan'i Norm hatramin'ny taona 2000, na dia efa resy lahatra aza izy fa Elliotson hatramin'ny fiandohan'ny taona 1970.
Ny fiainana taloha talenta: Norm dia fitsaboana ara-pahasalamana, niditra tao amin'ny sekoly fianarana amin'ny taona faha-19. Izy dia lasa mpamorona sy mpamorona zava-baovao, toa an'i Elliotson. Toa an'i Elliotson, Norm dia nandray anjara lehibe amin'ny sehatry ny fitarainana fanaintainana, na dia hitany aza fa nandritra ny androm-piainany dia niezaka ny hametraka marary amin'ny fanafody izy, raha toa kosa i Elliotson, dia nampiditra rongony ho an'i Angletera izy.
Zava-dehibe, i Norm sy Elliotson dia samy mpikomy ara-pitsaboana, izay samy nanoratra momba ny fihatsarambelatsihin'ny fanafody mahazatra amin'ny fanekena hevitra vaovao. Samy nampiasa ohatra iray avy tamin'ny tantara mihitsy aza izy ireo mba hanaporofoana ny hevitr'izy ireo, na dia tsy nahalala ny nosoratan'i Elliotson momba izany aza i Norm mandra-panoratany ny fitantarany manokana. Raha izany, dia toa tranga iray izay nanintona olona tsy nahy tamina fiainana taloha sy fahalalana. Ity tranga ity dia voamarina ihany koa amin'ny tranga Paul Gauguin | Peter Teekamp.
Fahatsiarovana jeografika: Rehefa tany Angletera i Norm, dia nahavita nampiditra fiara mpamily fiarakaretsaka nankany amin'ny birao medikaly nataon'i John Elliotson. Izany dia mampahatsiahy ny tantaran'i Anne Frank Barbro Karlen, toa an'i Barbro, nandritra ny diany voalohany tany Amsterdam tamin'ny faha folo taonany, dia afaka nitarika ny ray aman-dreniny tany amin'ny hotely tao amin'ny Anne Frank House tsy misy lalana.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Britanika i John Elliotson, raha i Norm Shealy kosa teraka tany Etazonia.
Fifandraisana ara-panahy na fitarihana fanahy: Toa ny fanahin'i Norm manokana na mpitari-dalana fanahy iray no nanamora ny fampandrosoana ity raharaha fanambadiana tao amin'ny vatana vaovao indray ity tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny fahatsapana ranomandry teo amin'ny hazondamosin'i Norm raha nahare ny anarana John Elliotson tao Snowmass, ary koa fony i Norm tao amin'ny taxi nitady vaovao momba an'i Elliotson any London.